Filtrer les éléments par date : mercredi, 24 novembre 2021
mercredi, 24 novembre 2021 19:52
Mila mianatra toe-karena
Ny Partenariat Public-Privé (3P), dia ny mpandrahara tsy miankina, na teratany na vahiny no mitondra ny amboniny, na plus-value entina anatsara ilay sehatrasa na ilay orinasa hiarahana mitantana na omena tantanana, fa tsy ny tsara ao amin'ilay orinasa no omena ka alain'ilay mpandraharaha.
Hita izany amin'ny resaka Jirama, nampidirina ny mpandraharaha tsy miankina ampitombo ny vokatra sy famokarana ambonin'ny efa misy sy vokarin'ny Jirama, fa tsy izany no mitranga ankehitriny, fa nomena ny mpandraharaha indray ireo toerana mandeha sy azahoana tombony, dia navelany ireo cas social, ary tsy nitondra amboniny izy.
Toy izay koa ny Air Madagascar, ny Parc Tsimbazaza, ny Secren, ny Sirama, ny hopitaly...
Aoriana kely ka tsy omena ny tsy miankina koa ny ministera satria betsaka ny tsy mandeha, na ny fonctionnaire sy ECD tsy voaloa karama, na ny lalampirenena tsy vita fanamboarana sy fikojakojana ?
mercredi, 24 novembre 2021 19:50
Rugby - FTMM Morarano : Notoloran’ny Kestora Jean Michel fanamiana sy fitaovana
Miatrika fifaninanana iadiana ny tompondakan’ny fileovana Andrefan’Iarivo taranja rugby ny klioba FTMM Morarano – Antananarivo V.
Tafakatra amin’ny dingana manasa-dalana ny FTMM Morarano ka hihaona amin’ny klioba avy eny Ambohimanarina amin’ny alahady ho avy izao.
Nanolotra survêtements sy fanampiana ho azy ireo ny solombavambahoaka voafidy tao Ambovombe Androy, sady Kestora voalohany eo anivon’ny Antenimieram-pirenena Jean Michel Henri.
Nisaotra an’ity farany i Fafah Xavier, mpitarika ny FTMM Morarano, no mbola manantena fanohanana avy amin’ny malalatanana ho an’ireto tanora ireto.
mercredi, 24 novembre 2021 14:50
Sarandalana : Tsy azo iodivirana ny fiakarany ho an’ny zotra nasionaly
Andalana ny fampiharana ny sarandalana vaovao araka ny fampahafantarana nataon’ny CPCTRV/KMMTF, ivondronan’ireo matihanina amin’ny fitaterana olona an-tanety, tapabolana lasa izay.
Ny 22 novambra 2021 no nofaritan’izy ireo fa hampiharana ny sarandalana vaovao.
Nisantatra ny fampiharana izany ireo kaoperativa mitrandraka ny zotra nasionaly mandeha Vatomandry sy Mahanoro, Faritra Atsinanana.
Tsy azo iodivirana io fiakaran’ny sarandalana io ho an’ny zotra nasionaly, ary kajy mifototra amin’ny fandaniana solika manoloana ny haratsin’ny lalana sy ateraky ny fanamboaran-dalana, ny fiakaran’ny vidin’ireo kojakoja fanolo no nitarika ho amin’izany, araka ny fanazavana teknika nataon’ireo mpandraharaha matihanina amin’ity seha-pitaterana olona ity.
mercredi, 24 novembre 2021 14:44
Kolikoly : Voaheloka higadra enin-taona an-tranomaizina ny Komandin’ny Brigadin’ny Zandary Sakaramy
Enin-taona an-tranomaizina sazy mihatra. Izay no didy navoakan’ny Fitsarana tao Antsiranana, manameloka ilay Gendarme Principal de Classe Exceptionnelle, Komandin’ny Brigady na CB-n’ny Zandarimaria Sakaramy, Distrika Antsiranana-II, Faritra DIANA.
Telo ny vesatra niampangana azy dia ny firaisana tsikombakomba amin’ny fampidirana ambalam-pamonjana, fanararaotam-pahefana ary kolikoly.
Ny 13 novambra teo no niandohan’ny raharaha. Nifanena tamin’olona mandroaka omby miisa 17 avy any amin’ny Kaominina Mangaoko Distrika Antsiranana-II ny andiana zandary notarihin’ity lehibeny ity.
Ara-dalana avokoa ny taratasin'omby rehetra nanaovan'izy fisavana, saingy tsy namelan’ilay CB ny tompon'omby fa nitakiany ny karatra maha mpivarotra sy patanty. Nilaza ilay tompon'omby fa tsy mpivarotra omby izy fa mpiompy ihany.
mercredi, 24 novembre 2021 14:22
Raharaha « Volamena 73,5kg » : Navoaka tao am-ponjan’i Tsiafahy ny Tale iray tao amin’ny STA
Tsy mbola tafaverina eto Madagasikara mandrak’ity ny androany ilay volamena 73,5kg nisy nanondrana an-tsokosoko ka tratra tao Johannesbourg Afrika Atsimo ny 31 desambra 2020.
Tsy mbola tafaverina an-tanindrazana ihany koa ireo Malagasy telo lahy, nitondra io volamena io ka voatazona atsy Afrika Atsimo.
Tsy mbola nisy raharaham-pitsarana nandeha mikasika ity raharaha ity. Ireo olona voatana am-ponja teto Madagasikara no manomboka mivoaka amin’izao.
Taorian’ny Tale jeneralin’ny ACM, dia lehilahy iray, izay Tale tao amin’ny Services et Transports Aériens na STA, ilay kaompaniam-pitaterana anabakabaka tsy miankina, tompon’ny fiaramanidina niondranan’ireo olona telo nitondra ny volamena 73,5kg nankao Johannesbourg indray koa izao no navoaka tao Tsiafahy, fonja nitazomana ireo lehilahy rehetra voarohirohy tamin’ity raharaha ity.
Efa herinandro teo izay no nivoahany, nahazo fahafahana vonjimaika.
mercredi, 24 novembre 2021 14:15
Antsakabary : Norobain’ny jiolahy ny volan’ny hopitaly
Nisy namaky ny faran'ny herinandro teo iny ny hopitaly ao Antsakabary, Distrika Befandriana Avaratra, Faritra Sofia.
Lasan’ny jiolahy tamin’izany ny vola rehetra.
mercredi, 24 novembre 2021 13:58
Fiadanana : Levon’ny afo ireo voka-pikarohanana tsy hita pesimpesenina
Nirehitra ny tranobe iombonan'ny foibem-pikarohana miisa roa dia ny CNRIT (Centre National de Recherches Industrielles et Technologiques) sy ny CNRE (Centre National de Recherches sur l'Environnement) etsy Fiadanana-Antananarivo Renivohitra.
24 novembre : Journée internationale de la Bible.
mercredi, 24 novembre 2021 09:25
Vanila : Ny diam-pamaky farany
Efa miala aina ny fihariana lavanila hatramin'ny nidiran'ny fanjakana amin'ny famerana ny vidiny, izay mandika tanteraka ny lalàna mifehy ny fihariana lavanila hametraka ny fahalalahana amin'izany sehatra izany (Loi 97-046 du 19 décembre 1997 : Article 8.- La commercialisation de la vanille est libéralisée à compter de la promulgation de la présente loi).
Ny fanomezana alalana hanao ny asa moa dia efa tsy resahina intsony, fa na ny rafitra aty amin'ny faritra aza no tokony hanao izany dia nitsabahan'ny fitondrana foibe ihany koa. Ka maro ireo tena matihanina mpanao lavanila no tsy nomena alalana (Agréement) na dia voahaja avokoa aza ireo fepetra momba ny asa lavanila.
Manjaka tokana ireo mpandrahara akaiky fitondrana, ka hatramin'ny vola eny amin'ny banky dia tsy ahitana aty amin'ny Faritra, ry zareo mitondra vola amin'ny fiaramanidina avy any Antananarivo, rehefa akaiky vita ny campagne, izay vao milaza manana vola omena ny mpandraharaha ny banky aty an-toerana.
mercredi, 24 novembre 2021 08:44
Lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana 2022 : Lany tsy nasiam-panitsiana
Nolanian’ireo Solombavambahoaka ny talata faha 23 novambra 2021 teny amin’ny Lapan’i Tsimbazaza, tsy nasiam-panovana ary tsy nasiam-panitsiana ny Lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana ho amin’ny taona 2022.
Solombavambahoaka miisa 84 no tonga nifidy ary nandany izany. Marihina fa tsy nandray anjara tamin’ny fifidianana ny vondrona parlemantera TIM.
Ny tatitra natao nandritra ny asam-baomiera dia nanisy fanitsiana miisa roa :
Ny voalohany dia mahakasika ny fampidinana ny haba-tseranana ho an’ny « bondillons », akora fanaovana savony ho 10%, raha 20% no voalaza anatin’ny volavolan-dalàna.
Ny faharoa dia momba ny ny fanafoanana ny “garantie à l’importation des PPN” izay omena ny mpandraharaha sasantsasany.
Ireo fanitsiana ireo dia tsy nolanian’ny Solombavambahoaka taorian’ny fandinihana natao nandritra ny fivoriambe.